लगातारको बर्षापछिको बाढीले दुधौली खोलाको पुल भासियो, आवागमन बन्द ! - लगातारको बर्षापछिको बाढीले दुधौली खोलाको पुल भासियो, आवागमन बन्द !
लगातारको बर्षापछिको बाढीले दुधौली खोलाको पुल भासियो, आवागमन बन्द !
२०७५, १७ भदौ, 05:37:36 AM
पुलमा सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना रहेकाले सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको दुधौली नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष मोहनचन्द्र दाहालले जानकारी दिए ।
पुलको पिलर भासिएपछि पुल नै लचकिएकाले अर्को विकल्प नहुन्जेलसम्म पुलमार्फत सवारी साधन नचलाउन नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।
सडक विभागलाई छिट्टै डाइभर्सनको व्यवस्था मिलाइ आवतजावतमा सहज बनाउन माग गरिएको स्थानीय कपिल खड्काले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ मा प्रजुना निमार्ण सेवाले ठेक्का लिइ सम्पन्न गरेको पुल भासिदा दुधौलीका स्थानीय व्यापारी र सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । २० मिटर लम्बाइ रहेको पुल रु २० लाख बराबरको लागतमा निर्माण भएको थियो ।